Edrogan Oo Codsaday In loo Gacan-galiyo Taliyaha Kurdiyiinta Suuriya
Edrogan Oo Codsaday In loo Soo Gacan-galiyo Taliyaha Ciidanka Kurdiyiinta Suuriya
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu ka dalbaday Mareykanka inuu u soo gacan galiyo taliyaha ciidamada Kurdiyiinta ee Suuriya, waxana uu cambaareeyeey Wadahadalada ay Washington ugu baaqaday inay wada yeeshaan Turkiga iyo Kurdiyiinta Siiriya.
Baaqan ka soo yeedhay Erdogan ayaa waxa uu yimid kadib madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, uu warqad uu u diray Erdogan 9-kii Oktoobar, uu ku sheegay in taliyaha ciidamda Kurdiyiinta “uu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo” madaxweynaha Turkiga “loona baahan yahay in qabsoomida wada hadaladan laga dhabeeyo.
Janaraalkan Kurdiga ah ee uu Turkigu codsaday in loo soo gacan galiyo oo magaciisu yahay Mazlum Abdi (Mazlum Kobani), ayaa u madax ah kurdiyiinta reer Suuriya ee (SDF), kuwaas oo Washington la ahaa xulafo dhaw oo ay iska kaashadeen gulufkii lagu qaaday Dawladda Islaamka ee Ciraaq iyo Levant (ISIL ama ISIS).
Dhinaca kale, Ankara waxay kooxdan SDF iyo hogaamiyaheedaba u aragtaa “argaggixiso” ku xidhiidhsan gooni goosatada PKK ee gudaha Turkiga.
Isaga oo la hadlayey warbaahinta TRT-ta dawladdu maamusho ayuu sheegay Erdogan in uu faray wasiirkiisa caddaaladda in uu “qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah” ee loogu talagalay soo gacan galinta Janankan Kuriga ah.
“Waxaan la wada gaadhnay Maraykanka heshiis ku aadan sidii la noogu soo gacan kalin lahaa ninkan argagixisada ah.